पाठ प्रभावहरूको यो पूर्ण प्याक 90 ०% छुटमा पाउनुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
निर्विवाद प्रस्ताव: फोटोशप पाठ प्रभाव प्याक 90% मा बन्द
आज हामीसँग हाम्रो अधिकार हुनुपर्दछ सबै प्रकारका पाठ प्रभावहरूको राम्रो भण्डार हुन र यसैले कुनै पनि प्रकारको काम अस्वीकार नगर्नुहोस् जुन कुनै ग्राहकले हामीलाई सोध्यो। यसका लागि हामीसँग फोटोशपमा पाठ प्रभावहरूको प्याकहरू छन् जस्तै वेबसाइटले 90 ०% छुटमा प्रस्ताव गरेको छ।
विशेष गरी हामी घटाउने कुरा गरिरहेका छौं १ 195 to देखि १ dollars डलर सम्म, त्यसैले यदि तपाईं उच्च गुणको पाठ प्रभावहरू चाहनुहुन्छ भने, यो खराब कुरा हुनेछैन यदि तपाईंले उनीहरूलाई नजिक जान्न रोक्नुभयो भने। सत्य यो हो कि यसले विभिन्न थिम र डिजाइन समावेश गर्दछ ताकि हामीसँग कुनै पनि प्रकारको ग्राहकहरूको लागि जान लाइब्रेरी छ। त्यसोभए उनीहरूलाई रोक्न र भेट्न ढिला नगर्नुहोस्। र यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने यस% ०% छुटको फाइदा लिनुहोस् तपाईंले भर्खरै यहाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ र खरीद गर्नुहोस्.
1 फोटोशपको लागि पाठ प्रभाव प्याकको सामग्री
2 पहिलो प्रभाव प्याक: 3D आधुनिक Modern ग्लैमर »
3 प्रभाव अर्को ब्याच: बरफ
4 3D लाई Gowasome
5 थ्रीडी वुड: र यस प्याकमा काठ नछुटाउनुहोस्
6 धातु फोटोशप शैलीहरू
7 पुरानो शैली: जब पुरानो अझै फेसनमा छ
8 ग्लो पाठ प्रभावहरू: जब पाठ अरू भन्दा बढी चम्किन्छ
9 एडोब फोटोशपका लागि पाठ प्रभावहरू: ज्वालामुखी
फोटोशपको लागि पाठ प्रभाव प्याकको सामग्री
हामीले पहिले नै भनेझैं, तपाईंसँग एक महान हुनेछ पाठ प्रभावहरूको सबै प्रकारको रिपोर्ट फोटोशपको लागि। हामी सबै सामग्रीहरू मूल्या assess्कन गर्न सक्छौं जुन तपाईं यस तरिकाले पाउनुहुनेछ:
फोटोशपको लागि प्रीमियम पाठ प्रभावहरू।
तिनीहरू धेरै छन् अनुकूलन गर्न सजिलो यसको बिभिन्न तहहरूलाई धन्यबाद दिनुहोस् जुन तपाईंलाई कृपया कृपया सम्पादन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
तिनीहरू कुनै पनि प्रकारको फन्ट वा आकारमा पूर्ण रूपमा समायोज्य छन्, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि कठिनाई बिना तपाईंको काममा एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको अर्को उत्तम पक्षहरू: तपाईं सक्नुहुन्छ सादा पाठलाई थ्रीडीमा रूपान्तरण गर्नुहोस् एडोब फोटोशपको लागि यो प्याकमा केहि धेरै उल्लेखनीय प्रभावहरू सहित।
अन्य विवरणहरू लाई ध्यानमा राख्नको लागि हामी चाहन्छौं त्यस्तै प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसले हामीलाई एडोब फोटोशपको लागि पाठ प्रभावहरूमा ठूलो मात्रामा संसाधनहरू प्रदान गर्नेछ। यी हुन्:
खरीदको समयमा तपाईं पहिले नै हात मा हुन सक्छ सबै पाठ प्रभाव तपाइँको मनपर्ने कार्यक्रम मा प्रयोग गर्न को लागी Adobe Photoshop।
सबै फाईलहरू PSD ढाँचामा पठाइन्छ र फोटोशप CS5 वा पछि आवाश्यक हुन्छ।
सबै पाठ प्रभावहरू दुबैका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ व्यापार र व्यक्तिगत उद्देश्य। अर्को शब्दहरुमा, तपाइँसँग संसारमा सबै स्वतन्त्रता छ तपाइँसँग जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्न गर्न; फोटोग्राफहरूको यो श्रृंखला जस्तै छ न्यु योर्क सार्वजनिक पुस्तकालय को लागी सार्वजनिक गरीएको छ.
पहिलो प्रभाव प्याक: 3D आधुनिक Modern ग्लैमर »
एडोब फोटोशपको लागि पाठ प्रभावहरूको पहिलो ब्याच "3D आधुनिक स्मार्ट वस्तु" आउँदछ जुन सादा पाठलाई 3D सँग बदल्न हडताल उपस्थितिको साथ। त्यो हो, यसले सादा र color्ग पाठलाई थ्रीडी एकमा उत्कृष्ट रंग र चमकको साथ रूपान्तरण गर्दछ। पाठ प्रभावको एक प्रकार जुन ती कार्डहरू वा पोष्टर्सको लागि वर्षको अन्त्यको लागि उपयुक्त हुन्छ वा जससँग "ग्लैमर" धेरै हुन्छ।
यो पाठ प्रभावको साथ छ चार rhomboid आकार पृष्ठभूमि त्यो पाठलाई अधिक उपस्थिति दिन जुन "ग्लैमर" मा लुगा लगाउँदछ र ठूलो चमक दिन्छ। हाम्रो हातमा ठूलो विविधता पाउन त्यहाँ विभिन्न डिजाइन र रंगहरू छन्। स्पार्कल्सलाई पाठमा थप "ग्लैमर" दिनको लागि पनि सामेल गरिएको हुन्छ जुन हामीलाई विशेष पार्टीको लागि टिकटको लागि आवश्यक छ वा बर्षको अन्त्य मनाउन हो।
प्रभाव अर्को ब्याच: बरफ
una बरफ प्रभाव श्रृंखला तिनीहरू क्रिसमस थिमको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा ग्रीष्म forतुका लागि स्फूर्तिदायी पेय वा आइसक्रीम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हामीसँग आफ्नै आवश्यकतामा निर्भर गर्दै हाम्रो हातमा बरफको प्रभावको एक धेरै किसिम छ, ताकि तपाईं प्रभावको यस ब्याचको साथ केही पनि मिस गर्नुहुनेछैन।
कुलमा हामीसँग छ:
Ice फरक आकारका बरफ प्रभावहरू।
Snow हिउँ ब्रशेस हाम्रो सिर्जनाहरू निजीकृत गर्न
हामीले सम्पादन गरेको पाठमा "पेन्ट" गर्न हिउँ प्रभावका २ शैलिका।
3 धूम्रपान ब्रश त्यो "हिमपातपूर्ण" वातावरणलाई टच दिन र ग्राहक वा कार्डको लागि पोस्टरलाई अझ यथार्थपरक बनाउन।
उच्च-गुणवत्ता रिजोलुसन: प्रभावहरू विस्तार गरेर पनि हामी देख्न सक्छौं कि उनीहरूले कुनै पनि संकल्प र तीखोपन गुमाउँदैनन्।
पारदर्शी तहहरू हामी जहाँ चाहन्छौं पाठ प्रभावहरू प्रयोग गर्न र पूर्ण रूपमा हाम्रो डिजाइन कार्यमा एकीकृत।
बिभिन्न बरफ पाठ प्रभावहरू जसले गर्दा हामी चाहेको वाक्यांशहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुकूलित गर्न सक्छौं।
यो एक क्लिकको साथ हुनेछ जुनसँग हामीसँग एक डिजाईन वा अर्को हाम्रो मनपर्ने र भविष्यवाणी गर्न छ।
तिनीहरू धेरै पेशेवर छन् र तपाइँको सूची एक साथ प्रदान गर्दछ पाठ प्रभावहरूको विविधता क्रिसमससँग सम्बन्धित खुशीदेखि लिएर स्फूर्तिदायी पेयहरूको विज्ञापनसम्मका सबै प्रकारका थिमहरूमा यसलाई समावेश गर्नेसँग। थोरै रचनात्मकता र डिजाइनको बारेमा बुझेर तिनीहरू कुनै पनि विज्ञापन, विज्ञापन वा उडानहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ।
3D लाई Gowasome
पाठ प्रभावको यो ब्याच पनि समावेश गर्दछ 12D मा १२ को श्रृंखलामा अघिल्लो भन्दा फरक, यो अधिक क्लासिक, युवा र गम्भीर केहि को लागी एक पूर्वदृष्टि छ, यद्यपि ती प्रत्येक मा रचनात्मकता को छाप अभाव बिना। र यो यो हो कि यी पाठ प्रभावहरू डिजाइनमा वास्तवमै उत्कृष्ट छन् ताकि हामीसँग थ्रीडी छ जुन एक विशिष्ट पाठ बाहिर निकाल्छ।
हामी सक्छौ धेरै धेरै अमेरिकी संग सम्बन्धित क्लासिक वा भिन्टेजको त्यो स्पर्शलाई बिर्सनुहुन्न जसले सेटमा थप विविधता थप गर्दछ। अरूहरू जस्तै, तपाईं एक सादा पाठ लाई एक हड्तालको उपस्थितिको साथ एक थ्रीडीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो आफ्नै बाहिर उभिन्छ।
यो धेरै मा हामी १२ पाठ प्रभावमा पुग्यौं समग्रमा यसलाई "Gowasome" भनिन्छ। हामीले बनाउने पाठमा पेन्ट गर्न हामी ब्रशेस वा प्रभाव शैलीहरू फेला पार्दैनौं, तर हामी फेला पार्दछौं कि ती प्रत्येक यसको श्रेणीभित्र राम्ररी डिजाइन गरिएको छ।
हामी एक highlight विद्यालय »लाई हाइलाइट गर्छौं ती आन्तरिक र बाह्य छायाहरूको लागि पाठलाई एक विशेष र धेरै "अमेरिकी" डिजाइन दिनुहोस्।
थ्रीडी वुड: र यस प्याकमा काठ नछुटाउनुहोस्
र यो प्याकमा काठ शैली हराउन सकेन त्यो पाठलाई धेरै नै प्राकृतिक प्रभाव दिन। 300 DPI मा उच्च गुणको पाठ प्रभावहरू जसले गर्दा उनीहरूको तीखोपन उत्कृष्ट छ र हामी तिनीहरूलाई ठूलो पार्दछौं भने पनि यसले रिजोलुसनको आयोटा हराउँदैन।
Este थ्रीडी काठ ब्याच पाठ उद्देश्यका लागि यो मुख्यतया निम्न कारणहरूले चित्रण गर्दछ।
बनावट को6प्रकार: नटडार्क, चेरीवुड, ओक, एल्डर, एप्लेट्री र ओकवुड।
प्रत्येक बनावट २००० x १2000०० पिक्सल र D०० डीपीआईको रिजोलुसनमा छ। त्यसोभए तपाईं आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
काठ शिकंजा- प्रतीकहरूको श्रृंखला जुन काठ स्क्रूको नक्कल गर्दछ। त्यसोभए तिनीहरूलाई कसरी राम्रोसँग राख्ने भन्ने कुराले सम्पूर्णमा अत्यन्तै आकर्षक र सुन्दर प्रभाव दिन सक्छ।
प्रयोग गर्न सजिलो: कार्यहरूका लागि धन्यवाद तपाई महान प्रकारका काठका उत्कृष्ट टुक्रामा सबै प्रकारका आकृतिहरू रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
3 डी को3शैलीहरू: त्यसैले तपाईं यसलाई छाया दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं प्रत्येक लागू गरिएको पाठलाई थप गहिराई दिन चाहनुहुन्छ।
१ 18D शैंली कूल थ्रीडी काठमा: शैलीहरू पाठ र ज्यामितीय आकार दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।
फोटोशपको लागि पाठ प्रभावहरूको प्रिमियम प्याकको एक धेरै प्रतिष्ठित धेरै। यदि तपाईं खोजी गर्नुहुन्छ काठलाई विशेष टच दिनुहोस् वेबसाइट वा ग्राहकको काममा, यो ब्याच प्राथमिक स्रोतको रूपमा पर्याप्त छ।
धातु फोटोशप शैलीहरू
यस प्याकमा धातु पाठ प्रभावहरू हराउन सक्दैन, जुन प्राय: डिजाइनरहरूको ठूलो संख्याले स्वीकार गर्दछ। सुन, चाँदी, तामा जस्ता धातुहरू, टाइप "ग्रन्ज" वा पेन्ट केहि शैलीहरू हुन् जुन यो पाठ प्रभावहरूको प्याकले समावेश गर्दछ।
त्यहाँ प्रीमियम धातुको पनि अभाव छैन तिनीहरूले कुनै विवरण छोड्न कि विवरण बाहिर लिन्छन् वा धातु संगीतसँग सम्बन्धित वेबसाइटको लागि नारा। र प्रकाश पाठ प्रभावको अर्को श्रृंखला जुन ती धातुहरूलाई पूर्ण रूपमा साथ दिन्छ तिनीहरूलाई पर्याप्त चमक दिन र उत्तम रूपमा खडा हुन।
कुलमा यी प्रभावहरू सम्पूर्ण सूची हुन्:
१२ धातु प्रभावहरू: पालिश, स्पीड, क्रोमा, सुन, ग्रन्ज, धातु, चारकोल, तामा, जाल, प्वालहरू, रस्ट र पेन्ट।
१ pro समर्थक धातु प्रभावहरू: इस्पात, धातु, क्रोमा, पट्टी, ठाउँ, खिया लाग्ने, घण्टी, स्क्र्याप, लाइनहरू, पोलिश, मार्क, कालो, परिश्रम र जाल।
१२ प्रीमियम थ्रीडी: लडाई, चलचित्र, फोर्स, डेल्टा, चरम र अधिक धेरै उच्च गुणवत्ताको श्रृंखलाको लागि।
१२ प्रकाश प्रभावहरू: strem, ब्लेज, खेल, टाइमर, स्पेस, प्लेट र अन्य बीचको विश्व कि रोशनको टच दिन शब्द वा वाक्यांशलाई चम्किन्छ।
Gold गोल्ड प्रभावहरू: तपाइँ ती पुरस्कार सम्बन्धित बयान र कुनै जस्तो देखिँदैन बनाउन को लागी तीन सुन सम्बन्धित पाठ प्रभावहरु मिस गर्न सक्नुहुन्न।
१ H मुख्यालय धातु प्रभाव: आइकनहरूको लागि विशेष जुन सामाजिक नेटवर्कको रूपमा हाम्रो वेबसाइट वा त्यो विशेष ग्राहकको लागि त्यो व्यवसाय कार्ड छुट्याउन सक्दछ।
यी धेरैको अंश तिनीहरू एक अर्काको साथ पूर्ण रूपमा मिल्दछन् र हामीले उनीहरूको सबै बिन्दुहरू प्राप्त गर्न कसरी तिनीहरूलाई राम्रोसँग संयोजन गर्ने भनेर जान्नुपर्नेछ। विशेष गरी उज्यालोहरू कसैसँग पनि उत्तम हुन्छन्, यद्यपि उज्यालोहरू स्क्र्याप धातु वा खिया लागेकोसँग सम्बन्धित भन्दा राम्रोसँग फिट हुनेछन्।
त्यहाँ अर्को धातु प्याक छ, यद्यपि यो गाढा टोनको साथ अर्को मोटिफको उद्देश्यले गरिएको छ र त्यत्ति उज्यालो छैन। चाहे तपाइँ एक वा अन्य प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाइँको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ, जे भनिएको छ, ती सबै अपवादात्मक गुणस्तर र उच्च रिजोलुसन हुन्। यद्यपि यो भन्नु पर्छ कि यो अलि अलि फरक शैलीको ब्याच, गर्न सक्छ "पोशाक" सामाजिक मिडिया आईकनमा सेवा दिनुहोस् त्यसोभए तिनीहरू अन्य वेबसाईटहरूबाट अलग देखिन्छन्।
पुरानो शैली: जब पुरानो अझै फेसनमा छ
यस प्याकमा डिजाइन र पाठ प्रभावहरूमा अन्य साइटहरूमा जान विन्टेज टचको अभाव छैन। उनीहरूले यी बोरिंग फ्ल्याट पाठहरूलाई उपयुक्तका लागि परिवर्तन गर्न यी पाठ प्रभावहरू प्रयोग गर्न बिर्सने छैनन् यसलाई समर पार्टीमा सम्बन्धित छAo मोती को लागी आउने को एक नुस्खा देखाउन जब गर्मी हिर्काउँछ।
फोटोशपको लागि प्रभाव प्याक भित्र रहेको विन्टेज शैली बन्डलको विशेषताहरू हुन्:
कुल sty 37 शैंलीहरू: कुनै पुरानो शैली पाइपलाइनमा छाडिएको छैन, त्यसैले तपाईंसँग कुनै पनि कामको मागका लागि सबै पर्याप्त स्रोतहरू छन्।
पूर्ण सम्पादन योग्य: तपाईले त्यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि कृपया विशेष स्पर्श दिनको लागि कि तपाईंलाई कसरी डिजाइन कार्य गर्भवती गर्ने थाहा छ।
यो कुनै पनि फन्ट र आकार वा भेक्टरसँग काम गर्दछ: text the पुरानो शैलीहरू कुनै पनि तपाईंसँग टेक्स्ट प्रभावहरूको यस प्याकसँग रहेको फ्ल्याट पाठहरू प्रदान गर्न क्लिकको कुरा हुनेछ।
उच्च गुणवत्ता PSs।
प्रयोग गर्न एकदम सजिलो: यस सन्दर्भमा केहि भन्नु हुँदैन किनकि यो स्वयं स्पष्टीकरणात्मक हो। एक क्लिक र जादू।
र हामी ती सबै सम्भावित तरिकाहरूमा सधै त्यो शब्द "विन्टेज" सँग सम्बन्धित छ। पछि त्यो गुलाबी «गुलाबी» जसमा कुनाहरू फ्रिफ्लेक्सनको साथ सम्पन्न हुन्छन् जुन थोरै थ्रीडीको साथ पाठमा गर्भवती गर्दछ, त्यो "रेट्रो" पनि हुन्छ जहाँ निलो टोन धेरै राम्रोसँग गुलाबीसँग जान्छ।
त्यहाँ केहि बढि "ग्रन्ज" छन् हामी जंगली पश्चिम मा थिए भने र ती ती डिजाइनहरूका ती प्रकारका लागि संकेत गरिएका छन् जुन कि "अमेरिकी" चीजको एक बिट चाहिन्छ। र यो यो हो कि यी sty 37 शैलीहरू कुनै विज्ञापन वा फ्लायरको कुनै पाठलाई धेरै स्फूर्तिदायी, र a्गले भरिएको र जीवनको धेरै चीजमा परिवर्तन गर्न सक्षम छन्। एउटा पुरानो शैली जुन हामीले अहिले सम्म हेरेका पाठको बाँकी प्रभावहरूको विपरित हो, त्यसैले यसले प्याकलाई पूर्ण पूर्ण बनाउँदछ जुन कुनै चीजको अभाव हुँदैन; विशेष गरी यसको मूल्य percent ० प्रतिशतले कम गर्न।
ग्लो पाठ प्रभावहरू: जब पाठ अरू भन्दा बढी चम्किन्छ
यी चमक प्रभाव हामी तिनीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ र हामी उनीहरूको बारेमा थोरै मात्र भन्न सक्छौं। तिनीहरू निष्पक्ष र आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सरल छन्: तिनीहरूलाई बाँकी कम्पोनेन्टभन्दा बढी हेर्नको लागि जुन हामी वेबसाइट, विज्ञापन वा उडानमा एकीकृत गर्न गइरहेका छौं।
कुलमा हामी यी सबैको साथ यो धेरैमा रहन्छौं:
ग्लो विशेष प्रभाव.
एक क्लिकको साथ प्रयोग गर्न सजिलो।
पूर्ण सम्पादन योग्य।
यो कुनै पनि प्रकारको फन्टसँग काम गर्दछ।
एडोब फोटोशपका लागि पाठ प्रभावहरू: ज्वालामुखी
र आगोले यी पाठ प्रभावहरू लिन्छ त्यसैले यो धेरै हडताल गर्ने। एकदम विशेष भएकोले, तिनीहरूलाई विज्ञापनको पाठमा कसरी लागू गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ जुन आगो र आगोसँग सम्बन्धित छ। र के यो लाभा पाठ प्रभावको यो श्रृंखला एक विशेष विषयवस्तुको उद्देश्य हो।
कुलमा there पाठ प्रभावहरू छन्:
लावा: यसको नामले स sugges्केत गर्दछ, ज्वालामुखीबाट उब्जाएको लाभा त्यो पाठलाई प्रकृतिको बल दिन।
हैक: अधिक एम्बर टोनको साथ, कालो ताराहरू यस शैलीको लाभामा र बाँकी भन्दा धेरै राम्रोसँग फरक छ।
आगो: वा फायरहरू, यो पाठ प्रभाव सिल्हूटले मनपराउँदछ जुन ज्वालामुखी यसको वरिपरि छ।
जलाउनुहोस्: पाठ प्रभाव जसमा अक्षरहरू सेकेन्डमा हराउने देखिन्छ इन्किपिएन्ट बर्न प्रभावको कारण।
ताल: वा आगोको ताल, अर्को ज्वालामुखी पाठ प्रभाव जसमा म्याग्माले बिस्तारै ज्वालामुखीबाट लाभाको खोलाहरू बग्दछ।
magma: म्याग्मा जुन पेट्रीफाइड छ त्यसैले कालोले हरेक अक्षरमा ठूलो ठाउँ ओगटेको छ जुन यस ज्वालामुखी पाठ प्रभावको साथ शैलीबद्ध शब्द बनाउँदछ।
माफ गर्नुहोस्: फोर्ज जहाँ धातुलाई आकार दिन गएको छ र जुन यहाँ सेतोको साथ प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन टाइपोग्राफीको भाग रंग गर्दछ।
उलार: एक अर्को उपस्थिति ज्वालामुखी पाठ प्रभाव एक महान उपस्थिति संग र त्यो केहि बिभिन्न रिजोलुसन पछि बाँकी भन्दा फरक छ।
छोटो, आठ ज्वालामुखी पाठ प्रभावहरू त्यो केहि विशिष्ट रोजगारहरूमा तिनीहरूको ठाउँ हुनेछ, तर त्यो हामीसँग सधैं हाम्रै हातमा हुन्छन् ती अनुरोधहरू जुन ग्राहकहरूले कहिलेकाँही गर्छन् हामीलाई बाहिर निकाल्न र यसले हामीलाई थोरै पागल बनाउँदछ। पाठ प्रभावहरूको यो प्याकको एक ठूलो विविधता छ र यो ब्याचले यसलाई देखाउँदछ।
यसमा यी सबै धेरै साथ पाठ प्रभावहरूको प्याकले धेरै गुण थप्नेछ र अपूरणीय मूल्य भन्दा बढिमा: 19 १a०% छुट सहित। त्यसैले हामी एउटा प्याकको बारेमा कुरा गर्दैछौं कि यसको सामान्य मूल्य १ 176 डलर हो। यदि तपाईंसँग एजेन्सी छ भने, भेट्टिनलाई मिस नखोलाउने प्याक प्रभावहरूको यो प्याकसँग बिभिन्न, जस्तै भिन्टेज, धातु, ज्वालामुखी, चमक, प्रकाश वा काठ अन्य धेरैको बीचमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » निर्विवाद प्रस्ताव: फोटोशप पाठ प्रभाव प्याक 90% मा बन्द
Side साइडबार CSS मेनूहरू तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न
ग्राफिक डिजाइनका लागि ल्यापटप कसरी छनौट गर्ने